रुबेल होस् नहोस्, तन्दुरी चिकेन खाऊ | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७८ बैशाख ५, आईतवार १६:५६ गते
प्रश्न : मनुष्यले आनन्द कहिले मनाउँदा हुन्छ ? उत्सव कहिले उचित हुन्छ ?
हदैको कन्जुसी छ । आनन्दलाई पनि कहिले मनाउने भनेर प्रतीक्षा गर्दछौ । दुःखको सम्बन्धमा कन्जुसी गथ्र्यौ भने पनि ठीक थियो कि मान्छे दुःखी कहिले हुनुपर्दछ ? यो सोध्दा पनि ठीक थियो । आनन्दको सम्बन्धमा सोध्छौ ! आनन्द त स्वभाव हो । मान्छे चौबीसघन्टा सुखी होस् । मान्छे प्रतिपल आनन्दित होस् । उत्सव त जीवनको ढङ्ग हो । उत्सव त चारैतिर चलिरहेछ । यो जुन विराट छ, उत्सवलीन छ । तिम्रो मर्जी, चाहे बाहिर उभिइराख, न डुब यो उत्सवमा, चाहे डुब ।
तिमी सोध्छौ, ‘मनुष्यले आनन्द कहिले मनाउँदा हुन्छ ?’
प्रश्नको अर्थवक्ता मैले बुझेँ । धेरै मान्छेहरुको प्रश्न हो यो । मान्छेहरु दुःखी हुनमा अलिकति पनि कृपणता गर्दैनन्, समय–असमय केही हेर्दैनन्, ऋतु–बेऋतु केही हेर्दैनन्, दुःखी हुनको लागि त चौबीसघन्टा नै तत्पर हुन्छन्, मौका मात्र चाहिन्छ । कहिले त मौकै नपाउँदा पनि हुन्छन् । कहिले त कारण नै नहुँदा पनि हुन्छन् । तर, सुखको सम्बन्धमा बडो कृपण छन् । लाख उपाय जुटाउ, तब मुस्किलले अलिकति मुस्कुराउँछन् । त्यो पनि बडो रोकिँदै–रोकिँदै, जस्तो कि उनीहरुमाथि एकदम ज्यादती भइरहेछ । हाँस्न कठिनझैँ लाग्दछ, नाच्न कठिनझैँ लाग्दछ, गीत गुनगुनाउनु कठिनझैँ लाग्दछ । हामीले दुःखसँग बडो गाँठो बानेका छौँ । दुःखलाई हामीले जीवनको चर्या बनाएका छौँ ।
एउटा रुसी कथा मैले सुनेको छु । कुनै सज्जनले सडकमा एउटा भिखारीलाई एक रुबेल दिए । त्यो स्वर्णिम जमानाको कुरा हो– यो जब एक रुपैयाँझैँ एक रुबेलले पनि धेरै कुरा किन्न सकिन्थ्यो । रुबेल रूसी सिक्का हो । केही छिनपछि ती सज्जन त्यहीँ बाटो फर्कंदै गर्दा देखे कि त्यो भिखारी एउटा होटेलमा बसेर तन्दुरी चिकेन चट्काउँदै थियो । उसले सहन सकेन र होटेलमै गएर उसलाई गाली गर्न थाल्यो ।
उसलाई भने कि तिमी सडकमा भीख माग्छौ अनि तन्दुरी चिकेन खान्छौ ? त्यो भिखारी पनि गज्जबको मान्छे थियो । धक मान्नुको सट्टा उल्टै त्यो दातालाई नै गाली गर्न थाल्यो । उसले भन्यो, ‘उल्लूको पट्ठा ! पहिला जब मसँग रुबेल थिएन तब म तन्दुरी चिकेन खान सक्दिनथेँ, अब जब मसँग रुबेल छ, तिमी भन्छौ, मैले तन्दुरी चिकेन खान हुन्न । उसोभए म तन्दुरी चिकेन खाऊँ कहिले ? रुबेल नहुँदा खानै सक्थिन, रुबेल हुँदा तिमी भन्छौ, नखाऊ, किनकि तिमी भिखारी हौ, तब म तन्दुरी चिकेन खाऊँ कहिले ?’
म तिमीसँग भन्दछु, रुबेल होस् नहोस्, तन्दुरी चिकेन खाऊ । किनकि म जुन तन्दुरी चिकेनको कुरा गरिरहेछु त्यसको लागि रुबेलको आवश्यकता पर्दैन ।
तिमी यो सोध्दै नसोध कि कहिले ? म जुन उत्सवको कुरा गरिरहेछु त्यो उत्सवको लागि सबै समय ठीक समय हो र सबै ऋतु ठीक ऋतु हुन् । म जुन वसन्तको कुरा गरिरहेछु त्यो बाह्रै महिना फैलन सक्दछ । म जुन फूलहरुको कुरा गरिरहेछु त्यो हर स्थानमा फक्रन सक्दछ, हर देशमा फक्रन सक्दछ, हर परिस्थितिमा फक्रन सक्दछ – सफलतामा, असफलतामा; जवानीमा, बुढेसकालमा; धनमा, निर्धनतामा । म शाश्वतको फूलहरुको कुरा गरिरहेछु ।
अब तिमी मसँग सोध्छौ, ‘मनुष्यले आनन्द कहिले मनाउँदा हुन्छ ?’
तिम्रो अभिप्रायः के छ ! कुनै दिन तय गरेर मनाउँछौ– कि आइतबार मनाउँ, छुट्टीको दिन ठीक हुन्छ । छ दिन दुःखी रहन्छौ, सातौँ दिन अचानक आनन्दित कसरी हुन पाउनेछौ ? छ दिनको अभ्यासले पछ्याउने छ ।
तिमीले देख्यौ कि देखेनौ, छुट्टीको दिन मान्छेहरु के गर्दछन् ? छुट्टीको दिन मान्छेहरु हरेक दिनको कामभन्दा बढी काम गर्दछन् । छुट्टीको दिन श्रीमतीहरु चिन्तित हुन्छन्, किनकि लोग्नेले घरमा काफी खटर–पटर मच्चाउँछ । कहिले कार खोलेर सफाइ सुरू गर्दछ, कहिले रेडियो खोल्दछ, कहिले घडी खोल्दछ – ज्यादै खटर–पटर गर्दछ । किनकि छ दिनको कामको अभ्यास, अचानक बेकाम कसरी रहन्छौ ? छ दिन सोच्दछ कि छुट्टीको दिन आउँदैछ, विश्राम गर्नेछु, र जब छुट्टीको दिन आउँछ, तब विश्राम गर्न त्यति सजिलो कुरा त हैन ! विश्राम त जीवनशैली बनेको छ भने मात्र गर्न सक्नेछौ । त्यो तनाव, भाग दौडको बानी, उसलाई छटपटी लाग्नेछ – अब के गर्ने ?
तब श्रीमती, बच्चाहरुलाई लिएर हिँड्यो, जाऊँ हिल स्टेसन । कम से कम ड्राइभ भए नि गर्नेछ । छुट्टीको दिन जति एक्सिडेन्ट हुन्छ दुनियाँमा त्यति अन्य दिनमा हुँदैन । र, छुट्टीको दिन मान्छेहरु यति थाकेर फर्कन्छन् कि कम से कम दुई– तीन दिन लाग्छ अफिसमा तब बल्ल तल्ल स्वस्थ हुन्छन् । छुट्टीको दिन महँगो पर्न जान्छ । छुट्टी मनाउन त्यति सजिलो कुरा त हैन । जबसम्म छुट्टी तिम्रो जीवनको कला नै नभएको होस् ।
तिमी सोध्छौ, ‘आनन्द कहिले मनाउने ?’
यदि तिमीले शर्त राख्यौ कि यी शर्तहरू पूरा होस् तब म आनन्द मनाउँछु – मान्छेहरुले यस्तै शर्त राखेका छन्, त्यसैले त दुःखी छन् । उनीहरु भन्दछन्, जब मसँग ठूलो महल हुनेछ, तब । जब बैंकमा मेरो धेरै व्यालेन्स हुनेछ, तब । जब दुनियाँको सुन्दरतम् स्त्री मलाई उपलब्ध हुनेछ, तब । कि ठूलो पदमा पुग्छु, तब । अहिले के आनन्द मनाऊँ ! उनीहरुले यति शर्तहरु बाँधेर राखेका छन् कि न ती शर्तहरु कहिले पूरा हुन्छन्, न उनीहरु कहिले आनन्द मनाउन पाउँछन् ।
च्वांग्तसु चीनको अद्भुत सन्त भयो । उसको श्रीमती मरी । सम्राट आफैँ समवेदना प्रकट गर्न आयो । सम्राटले सोचेर आएको थियो होला, च्वांग्तसु जस्तो विचारक, अद्भुत मान्छे, उसलाई के भनौँला ? यो यो भन्छु भनेर सबै तयार गरेर आएको थियो होला कि तिम्रो श्रीमतीको मृत्यु भो, सारै नराम्रो भो, दुःख नमान, सबै ठीक हुन्छ, आत्मा त मर्दैन–केही यस्तै कुराहरु सोचेर आएको थियो होला । यहाँ आएर हेर्दा त ऊ बडो अप्ठ्यारोमा पो प¥यो, उसलाई त बडो छटपटी भो । यी सज्जन त एउटा खैँजडी बजाइरहेका थिए एउटा झाडीमुनि बसेर र गाना गाइरहेका थिए । भर्खर बिहानै श्रीमतीलाई दफनाइएको थियो । र, यही साँझ– अहिले पूरै दिन पनि बितिसकेको छैन, जुन सूर्यले बिहान श्रीमतीलाई चिहानमा राख्दै गर्दा देखेको थियो त्यो सूर्य पनि अहिले अस्ताएको छैन, धेरै बेर भएको छैन, अहिले त घाउ ताजै छ– र, आफ्नो खुट्टा फैलाएर एउटा झाडीमुनि खैँजडी बजाइरहेछन् ।
सम्राट आइसकेको थियो त्यसैले केही भन्न जरूरी थियो, उसलाई अप्ठ्यारो त भयो । उसले भन्यो कि महाशय, दुःखी नहुनु काफी थियो तर सुखी हुनु जरूरतभन्दा बढी भो । दुःखी भएका छैनौ, ठीक । त्यो त म पनि भन्न आएको थिएँ कि दुःखी नहोऊ, तर अब त भन्ने कुनै आवश्यकता नै रहेन, जे म सोचेर आएको थिएँ त्यो त बेकारै भो । तर यति अवश्य भन्न चाहन्छु कि दुःखी नहुनु नै पर्याप्त छ, तर खुसी हुनु र खैँजडी बजाउनु र गाना गाउनु !
च्वांग्तसु ले भन्यो, ‘किन नगर्ने ? कुनै पनि आनन्दको अवसरलाई किन चुक्नु ? आफ्नी श्रीमतीलाई पनि म गाना गएर बिदाइ दिन सक्दिन ? उसोभए कसलाई गाना गएर बिदाइ दिऊँ ? जुन स्त्रीसँग म जीवनभर रहेँ, के यति पनि गर्न सक्दिनँ कि जाँदै गर्दा खैँजडी बजाएर अलबिदा भन्न सकूँ ! तिमीको हौ मेरो उत्सवमा बाधा पु¥याउने मान्छे ?’
सम्राटले त अब के गर्ने भनेर बुझनै सकेन । कुरो त च्वांग्तसुले बडो गज्जबको ग¥यो कि जसको साथमा जीवनको अनेक राग रङ्ग देखेँ; सुख–दुःख, उतार–चढाव देखेँ; जो हर घडी मेरो साथ छायाँझैँ रही; उसलाई नि एउटा गीत गएर बिदा दिन नसक्नू ! यो त अकृतज्ञता हुन्छ । यो त मेरो कृतज्ञभाव ! यो त म सिर्फ अहोभाव प्रकट गरिरहेछु ।
यदि तिमीले आनन्दको लागि अवसर खोज्यौ भने कहिल्यै मिल्दैन । तिमी आनन्दित हुन जान्दछौ, हर अवसर अवसर हो । हर मौसम मौसम हो । हर घडी तिमी कुनै न कुनै उपाय खोज्न सक्दछौ । क्या गज्जबको मान्छे रह्यो होला च्वांग्तसु । कस्तो घडीमा खैँजडी बजाउने कुरा खोज्यो । मनुष्य यस्तै हुनु पर्दछ ।
अतः म तिमीसँग भन्दछु, हर घडी आनन्द मनाऊ ।
(एस धम्मो सनंतनो, प्रवचन ७६)